Real madird oo wili ugu cad cad Saxiixa david Alaba xilli Kroos uu ka hadlay Arinta.
Home Horyaalka Spain Real madird oo wili ugu cad cad Saxiixa david Alaba xilli Kroos...
Real Madrid ayaa weli ah kuwa ugu cadcad inay dhameystiraan saxiixa Bosmanka David Alaba xagaaga 2021, inkasta oo aan la siinin wax muujinaya halka uu saaxiibkiisii hore ku sii jeedo, Toni Kroos wuxuu cadeeyay in daafaca Austrian uu tayo badan u keeni doono Los Blancos.
Kroos laftiisu wuxuu ka soo dhaqaaqay kooxda Bayern Munich kuna sii jeeday caasimada Spain sanadkii 2014, wuxuuna guulo ka gaadhay Champions League isagoo ka garab ciyaarayay Alaba kooxda Bavaria.
Kroos ayaa ku sharaxay wareysi uu siiyay Sky. Dhibaatada ayaa ah inaanan la ciyaarin ku dhawaad 7 sano Way igu adag tahay inaan ogaado waxa uu ka aaminsan yahay meesha uu doonayo inuu aado.
Imaatinka Alaba wuxuu si weyn u wanaajinayaa difaaca Los Blancos, in kasta oo ay noqon karto tallaabo lagama maarmaan ah haddii khilaafaadka qandaraas ee Sergio Ramos iyo Raphael Varane aan la caddeyn.
Previous articleGary Neville oo sheegay in liverpool ay Lumisay Hanaankeedii.
Next articleWax waliba oo kaga baahan tahay Falanqeynta kooxaha Atletico madird iyo Chelsea